Hunt Showdown Hacks Cheats, Aimbot, ESP, Wallhack - Gamepron
Ukuzingela: Ukubonisa ethubeleza
Zingela izilo kwaye uthathe iintshaba ngaphandle kokuziqikelela! I-GamePron inayo yonke iHunt: i-Showdown ESP, i-Aimbot, iWallhack, kunye nayo nayiphi na enye inkohliso oyifunayo.
Sele uyithengile iHunt: Howdown Hack? Fumana amanyathelo alandelayo apha
Nceda uqaphele: Phambi kokuba uthenge iHunt yethu: iiHacks zokubonisa, qiniseka ukuba isixhobo osikhangelayo ukuba usithenge sihlaziyiwe kutshanje okanye sisekwi-intanethi. Ngelixa sihlala sihlaziya izixhobo zethu, kukho ukulibaziseka ngexesha lokuhambisa kwezinye iimeko; Ngelixa ihlala ikhawuleza, inokuthatha iiyure ezimbalwa. Zonke izixhobo zethu zitshixiwe nge-HWID, oko kuthetha ukuba ungazisebenzisa kwikhompyuter enye-qiniseka ukuba ikhompyuter yakho iyahambelana nazo zonke izixhobo zethu kwangaphambi koko. Akukho mbuyiselo iya kunikwa wakube UKUJONGE isitshixo semveliso!
Onyuliweyo wethu Ukuzingela: Ukubonisa Hacks
Iqela leHacks, iAimbot, iNorecoil, i-ESP, iWall Hacks kunye nokunye
Thenga Ukuzingela: Ukubonisa IiHacks ngaphakathi 4 amanyathelo
Ukuzingela: iHacks Showdown, iAimbot, iNorecoil, i-ESP, iWall Hacks kunye nokunye
Khetha ukuzingela: Ukubonisa kukhetho olubanzi lwemidlalo efumaneka apha kwiGamePron
Zininzi izinto / ii-hacks onokukhetha kuzo, ke khetha zonke ocinga ukuba ziya kukunceda kakhulu!
Sithatha iintlawulo sisebenzisa i-100% ekhuselekileyo (kwaye ikhethekileyo kwi-GamePron) yokuhlawula inkqubo yokhuseleko lwabathengi
Emva kokuthenga, ungasebenzisa isitshixo sakho semveliso ukufikelela kunye nokukhuphela uHunt wethu: Showdown Intel hack!
Kutheni i-WTW Hunt: Showdown Intel hacks?
Ukukhwabanisa ngokubanzi kuya kubonakala ngathi kuyinkqubo eyoyikisayo, ngakumbi ukuba awukaze udlule kuyo ngaphambili. Sifuna ukwenza abaqalayo bazive ngathi banokwenza nantoni na apha kwi-GamePron, kunye nokuzingela kwethu: Ukubonisa i-Intel Hack akukho kwahlukile. Uninzi lwabanye abaphuhlisi bezinto ezizame ukuzama ukufumanisa ukuba bangalisebenzisa njani iqela lezinto ezingenamsebenzi kwizixhobo zabo, kodwa sijolise kuphela kwiziphumo. Ukuzingela: Ukubonakaliswa ngumdlalo onzima ngokubhekisele kwinqanaba lakho lesakhono, njengoko ungazukulwa nje nezilo, kodwa kuya kufuneka ukhathazeke ngamanye amaqela ngokunjalo!
Eyona njongo iphambili yalo mdlalo kukulayisha iimephu ezahlukeneyo kwaye ukhuphe "umphathi omkhulu" ohlala ngaphakathi. Ezinye zezi zilwanyana ziyothusa, kuba uza kube ulwa nezinto ezithandwa sisigcawu esikhulu okanye ugqwirha olunamandla! Uya kuphakamisa izixhobo zakho kunye nabalinganiswa njengoko uqhubeka nomdlalo, ukukunika umthwalo omkhulu ngakumbi ekusebenzeni nawo xa konke kusenziwa. Le yinkqubo ethatha uninzi lwabadlali iinyanga ukufezekisa, kodwa uya kuba nakho ukuqhuma kwizikhundla ngokusebenzisa iHunt yethu: Umboniso we-Intel Hack!
Ukuchaneka kuya kumisela ophumeleleyo kumadabi amaninzi, yiyo loo nto usebenzisa uHunt wethu: Umboniso weAimbot uhlala unomdla wakho. Abadlali baya kuthanda imipu ethile kunabanye, njengoko bonke benikezela ngezibalo ezahlukeneyo kwaye "baziva" xa kufika ixesha lokulwa. Xa unokuhlala ubuyela umva ekuzingeleni: Indawo yokubonisa iAmbot efumaneka apha kwiGamePron, akukho ndlela uza kuzifumana uphulukene nayo nayiphi na imfazwe.
Ngaphezulu kwayo yonke enye into, umgangatho uya kuhlala ungowona uphambili kuyo nayiphi na into ekhutshiweyo kwiMidlalo yePron. Nokuba umdlalo mtsha kraca okanye uyisihloko esidala, ungalindela ukufumana imveliso ethembekileyo nethembekileyo ngalo lonke ixesha.
Akusekho mfuneko yokunika abaphuhlisi bakho isibonelelo sokuthandabuza, njengoko unokubeka nje ukholo lwakho kwinkonzo enedumela njengale yethu. Ukuba ujonge indlela engabizi mali ininzi yokuziguqula uthixo wezemidlalo, i-GamePron inayo zonke izixhobo ezifunekayo ukwenza oko. Sukuchitha imali yakho ngokuzingela ngendlela engeyiyo: Ukubonisa abantu iiHacks eziza kukushiya ufuna okungakumbi! Ukufumana ukufikelela Hunt yethu: Showdown Intel lomnqweno yimfumba namhlanje kwaye ubone ukuba kutheni abasebenzisi abaninzi kangaka ukuthandana.
Ukuzingela: Ukwahlulahlula iWall Hack (ESP)
Ukuzingela: Umboniso wolwazi lomdlali we-ESP (Igama, imivalo yezeMpilo, umgama)
Ukuzingela: Indawo yokubonisa ye-ESP eneefilitha
Ukuzingela: Umboniso weAimbot
Ukuzingela: Izilumkiso zezilumkiso zotshaba
Ukuzingela: Ukubonisa imowudi yokutsiba okuphezulu (akukho monakalo wokuwa xa uqalisiwe).
Ukuzingela: Ukubonisa ithambo kunye nenjongo ephambili enokuqwalaselwa.
Ukuzingela: Ukubonisa ukubuyisa umbuyekezo
yethu Ukuzingela: Ukubonisa yimfumba Iimbonakalo
Ukuzingela: Umboniso we-Intel Player ESP
Sebenzisa iHunt yethu: Umboniso we-Intel Player ESP ukuchonga iintshaba kunye nabalingane bakho naphi na kwimephu! Ungabona phantse nayiphi na into oyifunayo kwiindawo eziqinileyo ezineli nqaku.
Hunt: Umboniso wolwazi lwe-Intel Player ESP (Igama, imivalo yezeMpilo, umgama)
Awuzukukwazi ukubona imodeli yomdlali kuphela kwiindawo eziqinileyo, kodwa ungabona ulwazi ngakumbi malunga nokujolise kuko (njengamagama, impilo, kunye nemigama!).
Ukuzingela: Umboniso we-Intel Item ESP eneefilitha
Iifilitha zenza umhlaba ube yindawo elula kakhulu, kwaye ungahamba ngeenyawo kummandla we-ESP ngaphandle kobunzima usebenzisa i-Item ESP yethu ngomsebenzi weefilitha. Fumana izinto ezilungileyo ngokukhawuleza!
Ukuzingela: Umboniso we-Intel Aimbot
Nabani na obekhe wadlala i-shooter kwixa elidlulileyo uyazi ukuba bahlala bewonga abadlali abanezakhono xa kunokwenzeka, kwaye i-Aimbot yethu iyabavumela ukuba bathwale amaqela.
Ukuzingela: Umboniso we-Intel Bullet track (osebenzayo kwimigama emifutshane naphakathi)
Umkhondo weBullet ulungele xa ujonge ukubona apho umhlaba uphuma khona, uvumela abasebenzisi ukuba baqinisekise ukubulala ngokukhawuleza okukhulu.
Ukuzingela: Ukubonisa ithambo le-Intel kunye nenjongo ephambili enokuqwalaselwa
Akunyanzelekanga ukuba ufefe uphinde uthandaze! Ukujolisa kwiindawo ezithile zeentshaba zakho usebenzisa iHunt: Showdown Aimbot enamathambo aPhambili.
Ukuzingela: Showdown Intel aimbot iitshekhi ezibonakalayo
Sebenzisa i-Hunt yethu: Ukubonisa ukubonwa kwe-Intel ngokuKhangela ngokuKhangela ku-Aimbot kuya kukuthintela ekwenzeni "intshukumo engathandekiyo" ngelixa ukopela.
Ukuzingela: Ukubonisa ukubuyiswa kwembuyekezo ye-Intel
Ukuphinda ubuye ngumcimbi ocacileyo, njengoko uza kuba nefuthe elibi ekuchanekeni kwakho. Ungasebenzisa iMbuyekezo yeCompensator yethu ukuyisusa kumdlalo wakho!
Hunt: Umboniso wesilumkiso sotshaba se-Intel
Ukuba utshaba luhlala lukwindawo yokukuthoba, umyalezo osisilumkiso uza kuthi gqi kwiscreen sakho (ungazenza ngokwakho, ngendlela!).
Ukuzingela: Ukubonisa imowudi ye-Intel super jump (akukho monakalo wokuwa xa usebenze)
Imowudi yokutsiba okuhle iya kuvumela abasebenzisi ukuba bahlale kumdlalo, nokuba bangafanelekanga! Susa nawuphi na umonakalo owayo onokuthatha kunye nale nto intle.
Abo kuni bagulayo nabadiniweyo kukuba yingxowa yokuhluzwa kwabanye abadlali ekugqibeleni bayifumene indawo efanelekileyo, njengoko esi sixhobo siza kutshintsha indlela odlala ngayo iHunt: Showdown ngokuphelele. Akunyanzelekanga ukuba ube nezona zixhobo zinamandla ukuze uphumelele ngesi sixhobo, kuba uya kuba nakho ukuthatha iintshaba ngayo nayiphi na into onayo (siyakuqinisekisa!).
UkuHuntwa okuDumileyo: Ukubonisa iiHelk Hacks kunye nokukhohlisa
Ukuzingela: Umboniso we-Intel ESP kunye neWallhack
Olunye uHunt: Ukubonisa i-Intel Hacks kunye nokukhohlisa
Eyona nto ithandwa kakhulu: Hacks Showdown kunye Cheats ziyabonakala kwabo bazisebenzisayo ngaphambili, kodwa ukuba utsha-kratya kumbono wokukopela, unokuthembela kwiGamePron ukukugcina ukhuselekile. Ezona zinto zidumileyo zifunyenwe kukukopela kwakho kuya kuba yi-Aimbot, iWallhack, i-ESP, kunye nezinye ezimbalwa ezithi zibandakanywe kolu khetho. Xa kukho iilobbies ezizele kukubila, kuya kufuneka ulwe nayo nangayiphi na indlela onokwazi ngayo!
Sebenzisa iHunt yethu: Bonisa i-Intel Hack iya kukuvumela ukuba uchume ngeendlela ezininzi kunenye, njengoko ungazukukhuphela nje umgca wokuqhekeka. Ungasisebenzisa esi sixhobo ukufumana indawo yotshaba, ubonise imiyalezo yesilumkiso, okanye uthathe ukhuphiswano ngaphandle kwalo naliphi na ithuba lokuziphindezela. Naliphi na inqaku onokulithemba lokufumana ekuzingeleni: Ukwahlula phakathi kweHacker kungenzeka ukuba ikhona ngaphakathi, ke kutheni ulinde? Ukufikelela ekuzingeleni: Showdown Intel kugula namhlanje kwaye uvumele iintshaba zakho zazi ukuba ngubani umphathi.
Sebenzisa i-Aimbot ngandlel 'ithile kuyimfuneko xa kufikwa kumba wokuqhekeza, ngaphandle kweyodwa, umisela umda kumandla akho okukhohlisa. Abo bakopayo ngaphandle kwe-Aimbot efanelekileyo baphoswa nje ngamathuba okwenza imali, nto leyo esizama ukuyiphepha ukuba kunokwenzeka apha kwi-GamePron. Sifuna ukuba abasebenzisi bethu basebenzise yonke into abanokuyenza ngeHunt: Showdown Intel Hack kunye nenyani yokuba iAimbot ebandakanyiweyo ngaphakathi kumgangatho womzi-mveliso kufuneka uyenze icace loo nto!
Sinikezela bonke abasebenzisi bethu ukufikelela kwi # 1 Hunt: Showdown Aimbot ekhoyo kwi-Intanethi, kwaye senza njalo ngaphandle kwemida. Ibandakanya iindlela ezininzi ezinokulungiswa, ezinje ngeSekethe ye-FOV ehlengahlengisiweyo kunye ne-Smooth Aiming ejongene nokuthintela intshukumo enzima. Ungasebenzisa i-Bone Selector ukujolisa kwiindawo ezithile zotshaba, kwaye isebenza kubo bonke abalinganiswa kunye nee-NPC! Iqukethe i-Hardware Emised Mouse Aimbot, okuthetha ukuba yenye yeendlela ezikhuselekileyo zokukopela.
I-ESP imele ukuqonda okungaphezulu kokuqonda, kwaye ngokusisiseko kufana nokongeza umbono owongezelelweyo kumdlalo wakho wokudlala. Awusoloko uzokuva iintshaba ngaphambi kokuba zisondele ngokwaneleyo ukuba zingahlasela, kwaye yeyona ngxaki iphambili kwimidlalo efuna ukusebenzisana. Ukuba umntu omnye ukhutshiwe ngokufihlakeleyo, wonke umsebenzi uyadutyulwa! Usebenzisa i-ESP yethu kunye neWallhack uhlala usazi iindawo zotshaba, kunye nabalingane. Unokufumana izinto eziluncedo usebenzisa i-Item ESP ngomsebenzi wokucoca, kodwa sisiqalo nje eso.
Umzobo wokudibana kwakhe nabani na ngokujonga kwi-Enemy Info ESP (ebonisa amagama abo, itsheki yokufa, imigama, okanye imeko yokudibana). Nokuba zizilo okanye abantu, akunamsebenzi! Zonke iidemon zaManzi, iiMeatheads, iZigcawu, kunye neeImmolators azisakwazi ukuzifihla kumandla akho.
Imigibe kunye nezinye izinto ezinokwenzakalisa umlingiswa wakho kunokubonwa kusetyenziswa umsebenzi we-Item ESP, ngenxa yoko akukho mfuneko yakuzixakekisa ngokunyathela imigibe yeebhere xa amandla ethu enikwe amandla.
Ukuprintwa luphawu olumangalisayo oluza kuvumela abasebenzisi bethu beMidlalo yePron ukuba babambe iintshaba zabo ngokungathi ziikati ezinkulu ehlathini! Unokubabamba abo ubachasayo kwaye ubazise ukuba ngubani inkosi yale seva enomsebenzi weFootprint, kwaye iluncedo kakhulu kumdlalo onje ngeHunt: Showdown. Kukho amaxesha apho ukulandela iqela ngokuzolileyo kuya kuhlawula, njengoko benokwenza buthathaka umphathi wakho phambi kokuba ubakhuphe (kunye nomphathi)! Ukuphumelela kuya kuwo onke amaxhoba, yiyo loo nto kubalulekile ukuba ukhumbule uMonakalo oMkhulu wokuHamba.
Ukonakaliswa okuphezulu kuya kukuvumela ukuba uhlasele ngamandla amakhulu kunaye nawuphi na umntu, ukukunika ithuba phantse kuwo onke amadabi. Unokwenza umgama webanga kwaye ubone ukuba ukufutshane kangakanani kwithagethi yakho, ngaphambi kokusebenzisa uMonakalo oMkhulu ukuwagqiba ngaphandle kokukhathazeka. Kutheni uzikhathaza ngokunika abachasi bakho ithuba lokuzilwela?
Ilungelo lokuzingela: Umboniso oHack wokuHamba awusoloko uyinto ekhethiweyo ngaphandle kokuba uyokuthenga ngeMidlalo yePron! Sinazo zonke ezona mpawu zaziwayo zibandakanyiwe kule Hunt: Ukwahlula phakathi kwemiboniso, kodwa sisiqalo nje eso. Ayisijonganga kuphela ezona mfuno zidumileyo zicelwe kuthi
Hunt: Hacks Showdown, kodwa sibandakanye nezinye izinto ezininzi ezongezelelweyo ezingafumaneki kwizixhobo zolu hlobo. Abanye abaphuhlisi baya kubetha nje iWallhack kunye neAimbot kunye kwaye bayikhulule imveliso, kodwa besifuna ukuya ngaphezulu nangaphaya.
Inqaku lesilumkiso linokusetyenziselwa ukubonisa umyalezo owenzelwe wena kwiscreen sakho nanini na xa utshaba lukufuphi, likuvumela ukuba uqokelele iibheringi zakho kwaye ujonge imeko ngokufanelekileyo. Umdlalo ungadlalwa kwiscreen esigcweleyo ngobu buqhetseba bunikwe amandla, kwaye ungasebenzisa iHWID Spoofer eza ecaleni kweHunt: Showdown Intel ukunqanda ukuvalwa kwangaphambili. Kuya kufuneka ukhubaze ukukhuselwa ukuze uqiniseke ukuba i-hack ayibhalwanga ngobuxoki, kuba ayinakusebenza ngokufanelekileyo ngenye indlela.
Ukuzingela: Hacksown Showdown imibuzo
Kutheni iHunt yethu: Umboniso we-Intel Hacks
Sigxile kumgangatho ngako konke ukukhutshwa, kwaye sisiqinisekiso. IGamePron ibidibanisa abasebenzisi ngeyona midlalo inokuthenjwa kuyo yonke imidlalo abayithandayo ukusukela oko savula, yiyo loo nto abasebenzisi beqhubeka nokuthembela kuthi. Ukufumana umthombo othembekileyo onokuhlala usiya kuwo ngee-hacks zakho kubalulekile! Ngaphandle kwezixhobo ezinokuthenjwa, ngokuqinisekileyo uqhekeza ngokungaboni.
Kutheni uHunt wethu: Umboniso we-Intel Aimbot
Ii-Aimbots azidalwanga ngokulinganayo, siyazi kakhulu. Akunakuphela nje ukuba sinokuqinisekisa ukuba le nto iyona nto ibhetele kakhulu: Ukubonisa i-Aimbot kwi-intanethi, kodwa abasebenzisi bethu baya kubuya nayo loo nkcazo. Ukuba ufuna ukuqhekeza kodwa ugcine ukujonga kwendalo, usebenzisa iHunt yethu: Umboniso we-Intel Aimbot yeyona nto unokukhetha yona.
Kutheni uHunt wethu: Umboniso we-Intel ESP
Ngokukhohlisa ngokuchanekileyo kwe-ESP, akukho mphefumlo kule planethi oya kukuwisa. Ukudutyulwa ngasemva kufuneka kube yenye yezona zinto zinomsindo kunxulunyaniswa nawuphi na umhlaseli, kwaye uHunt: Ukubonisa akukho kwahlukile! Thintela ukuphoxeka ngenqaku lethu le-ESP.
Kutheni uHunt wethu: Umboniso we-Intel Wallhack
I-Wallhacks zininzi njengezixhobo ze-ESP, ngengqondo yokuba uza kuhlala ubona ukuba ziphi na iintshaba kunye nazo. Ukuba awukwazi ukuqonda ukuba kutheni ukubona iqela elichasayo ezindongeni kuyinzuzo enkulu, unokufuna ukuba intloko yakho ihlolwe! Awuzukukwazi kuphela ukumisela ngaphandle komthungo, kodwa unokukwazi "ukudonga udonga" abantu abambalwa kwinkqubo.
Kutheni uHunt wethu: Umboniso we-Intel Norecoil
Ukuphinda ubuye akumenywanga nakweyiphi na ipati yokuzalwa, kodwa kulungile! Awunyanzelekanga ukuba ubandezeleke ngumsindo wokuphinda uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uve, akunyanzelekanga ukuba usokole ingqumbo yemipu iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde isebenze, njengoko unako ukwenza umsebenzi wethu weNoRecoil kwaye uthathe umntu nabani na ozama ukuma endleleni yakho. Kukwalungile ukuba uhlale ubuqili ngelixa ukopela kuba kungekho nkqubo yokujolisa iyenzeka.
Ungayikhuphela njani eyona Hunt ilungileyo: Showdown Intel hacks?
Kuya kufuneka uthenge isitshixo semveliso kwi-GamePron kwaye ke ulungile ukuya! Inkqubo yokwenza ukhuphelo lwezinto zethu zokukopisha sizenze ngokuthe ngqo ukuze abaqalayo 'bakwazi ukuhamba ngayo ngaphandle kokungqubeka endleleni. Akukho nxalenye ingena ngaphakathi kwinkqubo nokuba, njengoko unganyanzelekanga ukuba ufake nantoni na ngokwakho kwiifolda.
Kutheni le nto uzingela: Ukubonisa i-Intel hacks kubiza kakhulu kunabanye
Ngelixa kungabiza kakhulu xa kuthelekiswa nomgangatho osezantsi kunye nezinye iindlela ezingabizi phaya, sinokufikeleleka ngokuthelekiswa neenkonzo zokukhangela "zepremiyamu". Ayisiyiyo loo nto kuphela, kodwa zonke ii-cheats zethu zikhuselekile nge-100% kwaye zinokunikezelwa kuphela kwinani elithile labasebenzisi ngexesha elinye. Ngenxa yoko, kuye kwafuneka silungelelanise amaxabiso ngokufanelekileyo.
Kukho ixesha eliya kulungela iimfuno zakhe nabani na, kuba asikholelwa ekutshixeni abathengi bethu kwisivumelwano abangafuni ukuba yinxalenye yaso. Unokukhetha ukuthenga isitshixo semveliso esiya kuthi sikunike ukufikelela kuHunt wethu: Umboniso we-Intel Hack wosuku olunye, iveki e-1, okanye kwinyanga enye. Uza kuthatha isigqibo sokuba uza kunikwa ukufikelela ixesha elingakanani kwiHunt: Showdown Intel Hack, ngokuchasene neGamePron ethatha isigqibo kuwe.
Kuhle Ukuzingela: Ukubonisa yimfumba Iimbonakalo